Etu ị ga - esi ahọrọ ibu, akpa na akpa - News-Phu Ly Bao Co. Ltd
Etu ị ga - esi ahọrọ akpa, ngwugwu na akpa
Inwe ụdị akpa kwesịrị ekwesị, akpa ma ọ bụ akpa maka njem gị nwere ike ime ka ịkwakọ elu na ịmaba n'ụgbọ elu ma ọ bụ iti ụzọ ahụ mfe ma belata. Ma site n'ọtụtụ ụdị ị ga - ahọrọ, ikpebi nke ga - adabara gị mma nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Isiokwu a na-agbaji ụdị mkpuchi dị iche iche ma na-enye ndụmọdụ banyere ịhọrọ nha, ogo na ogo ịdị ogologo. Ọ na-agafekwa njiri mara dịka wiil, kọmpụta laptop na nnabata nke na-arụ ọrụ.
Ofdị mkpuchi, akpa na akpa
Enwere ụdị atọ dị obosara: akpa ndị nwere ụkwụ, ngwugwu njem na duffels njem. Mgbe ị na-ekpebi nke ga-adabara gị mma, ọ nwere ike ịba uru iche echiche banyere ihe dịka ebe ị na-aga, otu esi aga ebe ahụ na ihe ị na-eme ime mgbe ị ruru.
Ikike mkpuchi nke Wheeled
Uru doro anya nke akpa, ngwugwu na akpa nwere ụkwụ bụ etu ha si adị mfe iji ebugharị ọdụ ụgbọ elu na n'okporo ụzọ na-agafe agafe. Enwere ụdị atọ nwere ngwongwo wheeled: akpa mkpuchi, akwa azọ ụkwụ na azu azu.
Ihe mkpuchi: Ezubere maka ndị njem ọdịnala, mkpuchi efegharị bụ ihe ị na-ahụ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ n’azụ n’ọdụ ụgbọ elu. Ha na-abata n'ọtụtụ nha, na-arụkwa ọrụ siri ike nke a rụrụ maka ijikwa usoro eji ebu ibu. Ha kacha mma maka njem azụmahịa, nleta ezinụlọ, njem n'okporo ụzọ ma gaa obodo ndị mepere emepe.
Wheeled duffels: Ọ dịghị ihe na-eloda akụ dị ka akpa duffel, yana otu onye nwere wiil bụ ezigbo nhọrọ maka ndị njem na-aga n'ọtụtụ njem. Ọ bụrụ na ihe omume gị na-achọkarị ngbanwe nke nha na ụdị dị iche iche, ịkwagharị bụ ụzọ dị mma isi kpuchie ya. Maka ndị na-ebupute ọkụ, onye na-ebugharị ebugharị na-enye obere ohere mana ọ ga-enye gị ohere ka ịhapụ oge na ego ị ga-eji chọpụta akpa. Wụled duffels bụ ezigbo nhọrọ maka njem na-achọ njem dị egwu ma ọ bụ nke nwere ọdịdị dị mma, njem ezinụlọ na njem njem. Iji mụtakwuo banyere nhọrọ duffel, gụọ banyere duffel njem n'okpuru.
Azu paaki: Ndị njem na-ewu ewu, ndị a na-ejikọta ịdị mma nke akpa nwere ụkwụ na agagharị na akpaaka. You nwere ike iburu ọtụtụ ngwongwo na iji obere aka nke ịgbatị aka. I chere ihu n'okporo ụzọ dị arọ nke ụkwụ ma ọ bụ ogologo steepụ? N ’eriri ubu na eriri maka udo na-ebuga aka na-enweghị aka. Azụ azụ ndị a na-etinye n'okirikiri bụ ndị kachasị mma maka njem njem na njem njem. Iji mụtakwuo gbasara akpa azu, lee ngalaba ngwugwu njem dị n'okpuru.
Ihe ndị a sitere na duffels ndị bụ isi nke ị tụfuru ubu na duffels na-emegharị emegharị (ịmụ banyere wheeled duffels, lee ngalaba nke Wheeled nke isiokwu a.) Uru kachasị nke duffels karịa nhọrọ ndị ọzọ bụ atụmatụ ha dị mfe. Ọ dị mfe iji ha ma hazie otu ebe buru ibu maka ịkwakọ ihe gị na akwa gị. N'ezie, nke a nwere ike bụrụ ọghọm ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị a haziri ahazi nke chọrọ obere akpa na ngalaba dị iche iche iji dịrị ọcha. (Otu ụzọ ị ga - esi ahazi na pọpuụl bụ ịkwakọ ihe gị na ihe ị na - eme njem.
Akpa duffel dị n'ọtụtụ nha, site na akpa kọmpụta na-eburu ibu nke 20-30 lita ma ga-enwe uwe nke ngwụcha izu iji ruo nnukwu duffels na-ejide 100 lita ma ọ bụ karịa maka ihe omume ndị chọrọ tọn gia.
Akpa duffel ọdịnala nke na-enweghị wiil nwere ike iyi ihe mgbe ochie ma ọ bụrụ na enwere wiil dị mfe iji mee njem. Mana, maka njem gaa n’ebe ndị dịpụrụ adịpụ nke nwere n'okporo ụzọ na-enweghị nsogbu, okporo ụzọ a na-enweghị uwe, wiil ga-enwe nsogbu karịa ka ha kwesịrị, ha ga-atụkwasị ọtụtụ kilo na mkpokọta akpa. Ọ bụghị naanị na ngwa ọdịnala dị mfe karịa, ha nwekwara ike ịgagharị karịa ndị nwere wiil, na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịchebe n'azụ ụgbọala, ibu n'elu oche elu ụlọ ma ọ bụ eriri na anụmanụ. Duffels ndị a dịkwa mfe ịchekwa (enweghị akụkụ isiike, yabụ ha na-agbakọ obere) na-adịkarị ọnụ ala. Ha bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-arị ugwu, ndị njem na njem, na ndị mmadụ maka mmefu ego nke kwesịrị ibupute ọtụtụ gia.
Ihe ngwugwu njem
Azụ akpa-enyi na njem a na-aga njem karịa nke ebe akpịrị na-enweghị ike: na gravel, n'okporo ụzọ okwute, steepụ na steepụ ndị ọzọ na - ezighi ezi. Ihe ngwugwu njem dị ka akpa azụ ndị ọzọ n'ihe gbasara etu ị ga-eyi ha na nkwado ha na-enye, mana ha nwere njirimara njem dị iche iche, dị ka akpa nzukọ, mgbada zoro ezo na ubu, na njiri nche nchekwa, dị ka zippers mkpọchi. Ha dị mma maka ndị njem chọrọ inwe mkpanaka ma dịkwa mma na iburu ihe niile n'azụ ha.